China Paclobutrazol (PP333) orinasa sy mpamatsy | Lemandou
CAS No. 76738-62-0 Milanja molekiola 293,79
molekiolan'ny C15H20ClN3O Bika Aman 'endrika Vovoka kristaly fotsy
Fahaverezan'ny fanamainana 1.0% max. Teboka mitsonika 165-166 °C
Types 95,0% TC / 25,0% SC / 15,0% WP
Paclobutrazol dia afaka manakana ny tsy fitambaran'ny gibberellin endogenous, mampihena ny fizarazarana sy ny fanitarana ny sela zavamaniry, mampihena ny fitomboan'ny zavamaniry ary mampihena ny haavony. Rehefa ampiasaina amin'ny vary dia afaka mampitombo ny asan'ny vary indole acetate oxidase ary mampihena ny haavon'ny IAA endogenous amin'ny zana-ketsa. Paclobutrazol koa dia afaka manalefaka ny tombony ambony amin'ny fitomboan'ny zana-bary ary mampiroborobo ny fitomboan'ny tsimok'aretina (mpamboly), mampivoatra ny ravina sy ny rafitra faka, mampihena ny trano honenana ary mampitombo ny vokatra. Ny fandinihana an-anatika dia naneho fa ny Paclobutrazol dia afaka manamboatra ny sela ao amin'ny faka, rakotra ary ravina zana-ketsa vary ary mampitombo ny isan'ny sela ao amin'ny taova. Ny fanadihadiana dia mampiseho fa ny Paclobutrazol dia azo entin'ny voa, ravina ary faka. Ny ankamaroan'ny Paclobutrazol entin'ny ravina dia mijanona ao amin'ilay ampahany mandray ary tsy dia entina mivoaka. Ny fihenan'ny Paclobutrazol ambany dia manatsara ny fahombiazan'ny photosynthetic an'ny ravina zana-ketsa; ny fifantohana avo lenta dia manakana ny fahombiazan'ny fotosintèntika, mampitombo ny tanjaky ny taovam-pisefoana ao amin'ny rafi-pitabatabana, mampihena ny hamafin'ny fisefoana ireo faritra an'habakabaka, manatsara ny fanoherana ny tadim-boankazo, ary mampihena ny fifindran'ny ravina.
Paclobutrazol dia misy ny vokatry ny fanemorana ny fitomboan'ny zavamaniry, ny fanakanana ny fanitarana ny tahon-kazo, ny fanafohezana ny internode, ny fanaovana ny fotodrafitrasa ho ambany, ny fihenan'ny trano fandraisam-bahiny, ny fampiroboroboana ny zavamaniry, ny fampiroboroboana ny fanavahana ny voninkazo, ny fitomboan'ny fanoherana ny fihenjanana ary ny fanatsarana ny vokatra. Ity vokatra ity dia mety amin'ny vary, varimbazaha, voanjo, hazo fihinam-boa, paraky, voadio, soja, voninkazo, bozaka, sns toy ny (zavamaniry), misy vokany lehibe.
Manaraka: Diethyl Aminoethyl Hexanoate (DA-6)